လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကြဉ်တဲ့ သင်ဟာ COVID-19 ကာလ သူရဲကောင်းပါ - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 26/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
“လက်ကို ခဏ ခဏ ဆေးပါ၊ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ရှားပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေးကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်း လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့နဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။
ဒီလို COVDI-19 ရောဂါဆိုးကြီး နေ့စဉ်လူရာချီဆီကို တိုးပွားကူးစက်နေတဲ့ ကာလမှာ ဆိုင်ကယ်ကို ၂ ယောက် ၃ ယောက်ပူးပြီး စီးနင်းနေကြတာတွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ဆိုင်တံခါးပိတ်ပြီး အတွင်းထဲမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ရောင်းချနေတာတွေ၊ ဘတ်စ်ကားကို နေ့ညမပြတ် တိုးဝှေ့စီးနေရတာတွေ၊ ချစ်သူရည်းစား အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အကြာကြီး မတွေ့ရတော့မှာစိုးလို့ဆိုပြီး နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြောပြောပြီး ပြေးပြေးတွေ့နေတာတွေက မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။
မကြာခဏကြားနေရတဲ့ “လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါ၊ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါ” ဆိုတဲ့စကားကို ဘာကြောင့် အထပ်ထပ်အခါခါပြောနေကြတယ်ထင်ပါသလဲ။ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းက သင်နဲ့ သင့်မိသားစုကို COVID-19 ရောဂါဆိုးရဲ့ ရန်ကနေ အများကြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူဆိုတဲ့သဘောကလည်း ခက်သား။ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင် ခိုးလုပ်ချင်၊ နည်းနည်းလောက်တော့ လုပ်ချင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ အရပ်ထဲစကားစုပြောတာတို့၊ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးခြင်းလုံးခတ်တာတို့တွေကို လူစုလူဝေးလို့ သူတို့က မသတ်မှတ်ချင်ကြပြန်ပါဘူး။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လူတွေက လူစုလူဝေးကို မရှောင်ကျဉ်ချင်ကြတာလဲ? လူစုလူဝေးဆိုတာ ဘာလဲ? လူစုလူဝေးကို ရှောင်လို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ? ဆိုတာကို ပြောပြပါရစေ။
လူစုလူဝေးဆိုတာက မြင်သာအောင်ပြောရရင် လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေ၊ အကြောင်းအရင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် လူတွေအများကြီး စုဝေးနေကြတာမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အားကစားပြိုင်ပွဲက ပရိတ်သတ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လူစည်ကားနေတာတွေ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေ၊ အားလပ်ရက်ပန်းခြံထဲမှ အပန်းဖြေသူမားနေတာတွေ အားလုံးဟာ လူစုလူဝေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်အောက်မှာ အကျုံးဝင်နေပါတယ်။
ခုလို COVID-19 ကာလမှာတော့ လူစုလူဝေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းပြည်နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ လူ ၅ ဦးထက်ပိုမစုရတာတို့၊ ၁၀ ဦးထက်ပိုမစုရတာတို့ဆိုပြီး အသီးသီးသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ လက်ရှိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ရန်ကုန်လို့မြို့ကြီးတွေမှာ နေအိမ်မှာပဲ Stay at Home အဖြစ် နေထိုင်ကြပြီး အရေးပေါ်ကိစ္စတွေကလွဲပြီး အပြင်မထွက်ကြဖို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူ့သဘောသဘာဝကလည်း ခက်ပါတယ်။ မထွက်ပါနဲ့ဆိုပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အပြင်ထွက်နေရ၊ လူစုလူဝေးဖြစ်နေရတာတွေ အများကြီးပါ။ ရှောင်ပါဆိုပေမယ့် မရှောင်နိုင်ကြတဲ့အခါ ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး Contact လိုက်လို့မရတဲ့ လူနာတွေ တိုးလာတာမျိုး ပိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေက အင်နဲ့အားနဲ့ တိုက်တွန်းနေကြတာပါ။
ဘာကြောင့် လူစုလူဝေးကို မရှောင်ချင်ကြတာလဲ
လူစုလူဝေးဆိုတာ ဆူညံတယ်၊ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ကျဉ်းကြပ်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆို စိတ်ပင်ပန်းစရာလို့ ထင်ချင်စရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူမှုဗေဒသဘောအရဆိုရင် လူအများစုဟာ လူစုလူဝေးဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို မရှောင်နိုင်ကြဘူး။ စိတ်ဝင်စားကြတယ် စပ်စုချင်ကြတယ်၊ သွားချင်ကြတယ်၊ ပူးပေါင်းချင်ကြတယ်။
ဥပမာပြောရရင် လူတွေဟာ လူရှင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ထက် လူများတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ပိုရွေးချယ်ဖြစ်ကြတယ်၊ လမ်းပေါ်မှာ လူစုစု စုစု ဖြစ်နေရင် ဝင်ကြည့်ချင်ကြတယ်။ ဒါကိုက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ပျက်မှုတစ်မျိုးလို့ဆိုရမယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဖြစ်အပျက်ကို လက်ခံအားပေးလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ မသိစိတ်က စေ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ သဘာဝအပြုအမူတစ်မျိုးပါ။
ဒီနေရာမှာ အဓိကကျတဲ့အချက် ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ နေရာနဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ ဒီအချက်နှစ်ချက် ကိုက်ညီမှုရှိရင် “follow the crowd” ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဖို့ မစဉ်းစားပဲနဲ့ကို အလိုအလျောက် ပြုမူမိသွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင် ထမင်းကြော်နှစ်သက် နှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မနက်ခင်းစောစော လမ်းသွားနေရင် ထမင်းကြော်ဆိုင်တွေ့တယ်ဆိုပါစို့။ လူတွေထိုင်သောက်နေတာမြင်ရင် သူလည်း ဝင်စားမိသွားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ စားသောက်နေတာမျိုး မတွေ့ရရင်၊ ဒီဆိုင်ကောင်းရဲ့လားတို့၊ ပုံမှန်စားနေကျဆိုင်ဟုတ်မဟုတ်တို့ သူတွေးမိလာပြီး ဆိုင်ထိုင်ဖို့ကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှ သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့တာမျိုးပေါ့။
နောက်ထပ် ဥပမာပေးရရင် မီးလောင်နေတယ်လို့ အော်လိုက်ရင် ထွက်ကြည့်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးဖြစ်လာတယ်၊ အဲ့ထဲက ၇၀% နဲ့အထက်က မီးဝိုင်းငြှိမ်းပေးဖို့ မဟုတ်ကြဘူး။ သူတို့ ဘာကြောင့် ထွက်ကြည့်ကြလဲဆိုရင် သူများတွေလဲ ထွက်ကြည့်ကြတာကြောင့်ပါ။ ဒီသဘောပေါ့။
စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရင်းကြောင့်လို့ အကြောင်းပြကြပေမယ့် တကယ်တော့ လူ့သဘောကိုက လူများရာနေရာကို သွားစုဝေးချင်တဲ့ မသိစိတ်ရဲ့ စေ့ဆော်အားရှိနေတာကြောင့်ပါ။ လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင် လူစုလူဝေးကို ရှောင်ဖို့ ချင့်ချိန်စဉ်းလေ့ရှိသူက ၁၀% သာရှိပါတယ်တဲ့။
လူစုရင်၊ လူတွေအနားမှာနေရင်၊ လူအုပ်တောင့်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာ၊ လုံခြုံမှုရှိတယ်၊ ထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့ မသိစိတ်ရဲ့ စေ့ဆော်မှုတစ်မျိုးလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေက လူစုလူဝေးကို မရှောင်ချင်တာထက်၊ သွားပြီး စုဝေးချင်စိတ် လှုံ့ဆော်ခံရတာသာဖြစ်ပါတယ်။
လူစုလူဝေးကို မရှောင်ကြဉ်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာကို ဥပမာကောင်းကောင်း ပေးနေတာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါပဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါလူနာစတင်တွေ့ရှိတာက ဇန်နဝါရီရောက်မှပါ။
ပြည်နယ်အားလုံးဆီကို ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့သွားဖို့ အချိန် ၂ လ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိချိန်ကနေစပြီး တစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိ ပိုးအစောဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းက ကမ်းရိုးတန်းပြည်နယ်တွေချည်းဖြစ်နေတာပါ။ ကမ်းခြေတွေမှာ လူစုလူဝေးတွေနဲ့ အပန်းဖြေတတ်တဲ့ ဓလေ့ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့ အမေရိကန်တွေဟာ အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ရောဂါပိုးပိုမိုပြန့်နှံစေဖို့ တွန်းအားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါ။
ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ လူစုလူဝေးအခမ်းအနားတွေ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအခမ်းအနားတွေ၊ ပါတီတွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်လည်း အမေရိကန်မှာ ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါရဲ့ ဒဏ်ကို အများဆုံးခံနေရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြီး ကူးစက်ခံခဲ့ရသူ ၆ သန်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၂ သိန်းကျော်ရှိနေပါပြီ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ လူစုလူဝေးကို မရှောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက တိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူစုလူဝေးတွေ၊ လူအများကြီးရှိနေတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခိုင်းနေရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိမ်းချုပ် ဟန့်တားနိုင်တာကြောင့်ပါပဲ။ သူများမှာ ရှိနေရင် ကိုယ့်ဆီမကူးနိုင်သလို၊ ကိုယ့်မှာရှိနေရင်လည်း တခြားလူတွေဆီ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
အစုအဝေးတွေကို ဟန့်တားခြင်းအားဖြင့် COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကို ကောင်းကောင်းတားဆီးနိုင်ပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်မှုကို သေချာအာရုံစိုက်လုပ်ခွင့်ရစေတယ်ဆိုတာကို တရုတ်နဲ့ အီတလီတို့က သက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တတ်အားသရွေ့ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကျဉ်လိုက်ရုံနဲ့ သင်ဟာတိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နေတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ လူတစ်ဦးချင်စီရဲ့ အသိစိတ်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ နေအိမ်ကနေ အပြင်မထွက်ပဲ နေထိုင်မယ်၊ ထွက်ဖြစ်ရင်တောင် လူတွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ၆ ပေ ဖယ်ခွာပြီး သွားလာနေထိုင်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုရော၊ သင့်မိသားစုကိုရော၊ သင့်တိုင်းပြည်ကိုပါ ကယ်ဆယ်နေသူဖြစ်ပါပြီ။
သင်ဟာ COVID-19 ကာလ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာကို စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး လူစုလူဝေးတွေကို ရှောင်ဖယ်ကာ သက်သေပြလိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။